पल प्रकरणमा नायिका स्वस्तिमा खड्काले तोडिन् मौनता, कसकाे पक्षमा बाेलिन् ? - सिधा मिडिया
पल प्रकरणमा नायिका स्वस्तिमा खड्काले तोडिन् मौनता, कसकाे पक्षमा बाेलिन् ?
२१ फाल्गुन २०७८, शनिबार ०९:४८ मा प्रकाशित
573 जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । अभिनेता पल शाह प्रहरी हिरासतमा छन्। एक नाबालिगले जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरी दिएपछि अभिनेता शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
हाल उनी तनहुँ प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। पल शाह पक्राउ परेसँगै यसबारेमा नेपाली समाज दुई भागमा विभाजित भएको छ। उनीमाथि सहानुभूति जनाउनेहरुको ठूलो भीड छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उनका प्रशंसक र मिडियाकर्मीको लामै लस्कर देखिएको छ।
पल प्रकरणबारे कला क्षेत्रका मानिसहरुले पनि आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। कोहीले पलका लागि न्याय मागेका छन् भने कोहीले नाबालिग गायिकाका लागि न्याय मागेका छन् ।
म कसैलाई पनि भोट हाल्दिनँ भन्न किन नपाउने ?
“राजनैतिक कठघरामा गोपालमान: कार्यकर्ताको प्रस्ताव सुन्ने की ? नातागोताको मुख हेर्ने”
यो वेबसाइट सिधा मिडियाको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । सनसनि रहित तिखो प्रहार सत्य, तथ्य र सहि सुचना आम नागरिकहरुलाई दिने दायित्व यस अनलाईनले बोकेको छ । तपाईंको वरपर भएका कुनैपनि सूचना, समाचार र कार्यक्रमको जानकारी दिन र सहकार्य गर्न ईमेल मार्फत सिधा मिडियामा जोडिन सक्नुहुनेछ । समाचार र सहकार्यको लागी : sidha[email protected] मा ईमेल मार्फत खबर पठाउनुहोस् ।